Papa poara Saga Facebook
December 24, 2013 ny Isobella Franks Mametraha hevitra
Papa poara Saga Facebook dia lalao Mpanjaka, ny mpandraharaha ny Candy hanorotoro sy Pet Rescue Saga.
Ny tanjon'ny lalao dia ny hanampy Papa poara Aza kivy manodidina ny tontolo mahagaga wacky Tsirom tsimatry, acorns sy ny adala chilies. Mila mazava ny siny rehetra eo amin'ny farany ambany ny efijery. Amin'ny alalan'ny fanomanana tsara sy ny mikendry afaka manao ny ankamaroan'ny manam-petra Papa poara ny angovo. Mikapoka ny namana tsara indrindra ho isa be noho 100 fahafinaretana, Tsirom ary sarotra ferociously ambaratonga.
Tena mafy sy lehibe ialana voly!